Umkhiqizi Nomthengisi weChina Aluminium | UKunda
Ibanga lesicelo: amathuluzi wokudlulisa amandla (njenge: ama-racks emithwalo yemoto, iminyango, amawindi, imizimba yemoto, amaphiko okushisa, amagobolondo egumbi). Izici: amandla aphakathi nendawo, ukumelana nokugqwala okuhle, ukusebenza kahle kwe-welding, ukusebenza okuhle kwenqubo (okulula ukukhishwa), ukusebenza kahle kwe-oxidation nokusebenza kombala.
Ububanzi besicelo: amathuluzi okudlulisa amandla (njengalawa: ama-racks emithwalo yemoto, iminyango, amawindi, izidumbu zemoto, amaphiko okushisa, amagobolondo egumbi).
Izici: amandla aphakathi nendawo, ukumelana nokugqwala okuhle, ukusebenza kahle kwe-welding, ukusebenza okuhle kwenqubo (okulula ukukhishwa), ukusebenza kahle kwe-oxidation nokusebenza kombala.
Izinduku ze-aluminium eziyi-1000 ziyizichungechunge ezinokuqukethwe kwe-aluminium kakhulu phakathi kwawo wonke uchungechunge. Ubumsulwa bungafinyelela ngaphezu kwe-99.00%.
2000 chungechunge aluminium izinduku. Kubonakala ngokuqina okuphezulu, nokuqukethwe okuphezulu kakhulu kwethusi, okucishe kube ngu-3-5%. Izinduku ze-aluminium zochungechunge ezingama-2000 yizinto zokwenziwa kwe-aviation aluminium, ezingasetshenziswa kakhulu ezimbonini ezivamile.
Izinduku ezingama-3000 zochungechunge lwe-aluminium zenziwe ngamanganizi njengengxenye eyinhloko. Uchungechunge olunomsebenzi ongcono wokulwa nokugqwala.
Izinduku ze-aluminium ezingama-4000 zezinto zokwakha, izingxenye zemishini, izinto zokwakha, izinto zokushisela; iphuzu lokuncibilika okuphansi, ukumelana okuhle nokugqwala, ukumelana nokushisa nokuqina kokugqoka
Izinduku ze-aluminium ezingama-5000 zingabizwa nangokuthi ama-aluminium-magnesium alloys. Izici eziyinhloko ukuminyana okuphansi, amandla aqine kakhulu kanye nokunwebeka okuphezulu.
Izinduku ze-aluminium ezingama-6000. Iqukethe ikakhulukazi izinto ezimbili ze-magnesium ne-silicon, efanelekile kuzinhlelo zokusebenza ezinezidingo eziphakeme zokumelana nokugqwala kanye ne-oxidation.
Izinduku ze-aluminium ezingama-7000 ikakhulukazi ziqukethe i-zinc. Futhi ingeyochungechunge lwe-aerospace. Kuyi-alloyum-magnesium-zinc-copper alloy, i-alloy elapheka ukushisa, kanye ne-super hard aluminium alloy enokumelana okuhle kokugqoka.
Izinduku ze-aluminium ezingama-8000 zisetshenziselwa kakhulu ucwecwe lwe-aluminium, futhi izinduku ze-aluminium azisetshenziswa kakhulu ekukhiqizeni.
Langaphambilini Umholi Wokuhola
Olandelayo: Plate Ukuhola